Maitiro ekuziva mubereki ane chepfu | Bezzia
Maria Jose Roldan | 19/03/2021 22:39 | Dzidzisai vana
Kashoma kuwana mubereki anoziva kuti ine chepfu kumwana wake uye kuti kukurudzirwa kwakapihwa hakuna kukwana. Kuva mubereki akanaka kunoenderana kusvika padanho rakakura pane hunhu hwakapihwa kumwana wako panguva yekudzidza kwemwana. Ivo baba vanofanira kubatsira mwana kukudziridza hunhu chaihwo uye hunhu hwakakodzera.
Kana zvisiri, mubereki anogona kunge asiri kuita nemazvo uye anoonekwa semubereki ane chepfu. Muchinyorwa chinotevera isu zvakadzama hunhu hunozivikanwa sevabereki vane chepfu hunowanzo kuve nahwo uye maitirwo acho kuitira kuti maitiro ekurera ave akanakisa.
1 Kunyanya kudzivirira
2 Zvakanyanya kutsoropodza
5 Vanoisa kumanikidza pazvidzidzo
6 Negative uye kusafara nenyika
Kuzvidzivirira zvakanyanya ndechimwe chezvinhu zvakajeka uye zvakajeka zvemubereki ane chepfu. Mwana anofanirwa kuve nemhosva yezvikanganiso zvaanoita sezvo izvi zvichizomubatsira kuumba hunhu hwake zvishoma nezvishoma. Kuwedzeredza kwekudzivirirwa kune chikamu chevabereki hakuna kunaka mukukura kwakanaka kwemwana.
Hazvina basa kushora nekushoropodza vana nguva dzese. Naizvozvi, kuzviremekedza kwevana uye kuvimba kunodzikira zvishoma nezvishoma. Zvakanakisa, vakorokotedze pane zvavakaita uye zvinangwa. Kushoropodzwa kubva kuvabereki kunosiya vana pane vanozvidzivirira nguva dzese uye vanonzwa vasina basa mune zvese zvavanoita.
Vabereki vane chepfu vanowanzozvifunga nevana vavo. Izvo hazvipe kukosha kune zvakasiyana zvidikanwi izvo vana vanazvo uye vanongozvifunga ivo vega. Kuzvifunga kunokanganisa mamiriro emanzwiro emwana uye zvinogona kukonzera kukwirira kwekushushikana uye kushushikana.
Kukwidziridzwa kwechiremera ndechimwe chezvinhu zvakajeka zvevabereki vane chepfu. Ivo havachinjiki kune chero maitiro evana vavo uye vanomanikidza masimba avo nguva dzese, izvo zvinokonzeresa kunzwa kwekutadza muvana. Nekufamba kwenguva vana ava vanova vanhu vakuru vane matambudziko mazhinji epfungwa izvo zvinokanganisa zvakashata hupenyu hwako hwezuva nezuva.
Vanoisa kumanikidza pazvidzidzo
Iwe haugone kumanikidza mwana kudzidza chimwe chinhu chaasingade. Vabereki vazhinji vanomanikidza vana vavo kuti vasarudze rimwe basa vasingatarise zvavanonyatsoda.
Negative uye kusafara nenyika
Vabereki vane chepfu havana mufaro nguva dzese uye havagutsikane nehupenyu hwavanorarama. Uku kusagadzikana uye kusava netariro kunogamuchirwa nevana nezvakaipa zvese izvo zvinosanganisira. Nekufamba kwenguva vanove vakasuwa uye vasina mufaro vana vasina kugutsikana nechinhu.
Pakupedzisira, huturu hwevabereki hunotorwa nevana, chimwe chinhu chinoitika kana wasvika padanho revakuru. Vabereki vanofanirwa kurera vana vavo vachiteedzera akateedzana ehunhu hwakadai sekuremekedza kana rudo kuona kuti ivo vanhu vakanaka munguva refu. Izvo zvakakosha kuti vana vakwanise kukura zvizere uye kwete kuvaganhurira nenzira yekushusha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Dzidzisai vana » Maitiro ekuziva mubereki ane chepfu
Kukura pabhokisi rako, gadzira gadheni remuguta
Zvakakosha kugadzira kamuri yekuwachira kumba